Home Wararka Gudaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo Arrimaha Abaaraha kala hadlay Safiirada Caalamka
Ergeyga gaarka ah ee Madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha Gurmadka Abaaraha Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa kulan qadka fogaan aragga ah la yeeshay kulan ay safaaradda Jarmalku soo qabanqaabisay oo ay kasoo qeybgaleen deeqbixiyeyaasha fadhigoodu yahay Nairobi.
Safiir ku xigeenka Jarmalka Sascha oo hadalkiisa ku billaabay in uu bogaadinayo masuuliyadda hoggaanka cusub ee Soomaaliya ay iska saarayaan arrimaha biniaadannimada iyo sida firfircoon ee Xafiiska ergeygu u dhaqaajiyay howlahaan ayaa caddeeyay in Jarmalku xil iska saarayo gacan siinta Soomaaliya isaga oo sheegay in ay sanadkaan ku bixiyeen Soomaaliya ilaa 45 Milyan oo Yuuro.
Ergay Cabdiraxmaan oo Dowladda Jarmalka iyo hayadaha kaleba uga mahadceliyay sida ay ugu heellanyihiin mar walba gacan siinta dadkiisa ayaa uga warramay xaaladda daran ee abaaraha iyo sida looga baqanayo in ay macluul isu beddesho.
Ergeyga ayaa intaas kadib ku tirtirsiiyay kasoo qeybgalayaashu in ay kordhiyaan tageeradooda dhaqaale Isla markaana ka gacan siiyaan sidii indhaha caalamka loogu soo jeedin lahaa xaaladda bini’aadannimo ee ka taagan Soomaaliya.
Danjireyaasha ayaa ballanqaaday in ay ku dedaali doonaan in dowladahoodu kordhiyaan gacan ka geysashada abaaraha Soomaaliya iyaga oo Dhanka kalena tilmaamay in ay aad u daneynaynayaan wax ka qabashada sababaha iyo helista xal waara.
Previous articleKenya oo sheegtay in Madaxweyne Xasan Sheekh Aqbalay in Soomaaliya u dhoofiyaan Jaadka
Next articleCiidanka dowladda & Hir-Shabeelle oo howlgal qorsheysan ka fuliyay Gobolka Hiiraan
Daawo:- Cristiano Ronaldo Oo Go’aan Kama Dambays Ah Ka Gaadhay Mustaqbalkiisa...
Michael Owen Oo Qirasho La Yaab Leh Sameeyay Kadib Niyad Jabkii...